राज कुन्द्रा घटनामा शिल्पालाई लाग्यो अर्को झट्का ? « Etajakhabar
राज कुन्द्रा घटनामा शिल्पालाई लाग्यो अर्को झट्का ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीलाई फेरी अर्को झट्का लागेको छ । उनले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै २९ भारतीय मिडिया विरुद्ध २५ करोड क्षतीपुर्ती माग राखेर उजुरी दिएकी थिइन् । उनको उजुरीमा सुनुवाई गर्दै मुम्बई उच्च अदालतले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा शिल्पा सेट्टी र राज कुन्द्राको विषयमा समाचार छापिनु मानहानी नभएको बताएको छ।
सुनुवाइपछि शेट्टीविरुद्धका केही भिडियोहरू भने संचार माध्यमवाट हटाइएको छ। न्यायाधीश गौतम पटेलले शिल्पाको निवेदनमाथि मध्यनजर गर्दै मिडियामाथि रोक लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गलत प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुनुवाइको क्रममा प्रहरीका अनुसार समाचार बनाउनु गलत नभएको उल्लेख गरिएको छ।
नायिका शिल्पा शेट्टीले २९ मिडियाकर्मी र मिडियाबिरुद्ध मुम्बई उच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले मिडियाले झूठो रिपोर्टिङ गरेको र आफ्नो छवि बिगारेको शेट्टीले आरोप लगाएकी थिइन्।
अ श्ली ल फिल्म निर्माण र प्रसारणको मामलामा शिल्पाका पति राज कुन्द्रा पक्राउ परेपछि शिल्पा पनि चर्चामा आएकी छन् । उनको नाम जोडेर भारतीय मिडियामा धेरै समाचार बनाइएका छन् । उनका विगत देखि ब्यवसायीक जिवनका बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । हरेक दिन यो विषयसँग जोडिएर केही न केही समाचारहरु भारतीय मिडियामा आइरहेका छन्।
जसका कारण शिल्पाका पति झन्–झन् समस्यामा पर्न थालेपछि शिल्पाले मिडिया विरुद्ध मुद्दा हालेकी हुन्। राज कुन्द्राको अ श्ली ल भिडियो निर्माणको मामलामा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीसँग पनि सोधपुछ भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा एक दर्जन भन्दा बढी महिला कलाकारहरुसंग पनि वयान लिएको छ ।